Toddoba qof ayaa lagu dilay fowdo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Kabul iyadoo dhammaan duulimaadyadii ganacsiga la baajiyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Toddoba qof ayaa lagu dilay fowdo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Kabul iyadoo dhammaan duulimaadyadii ganacsiga la baajiyay
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Toddobo ayaa lagu dilay fowdo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Kabul, iyadoo dhammaan duulimaadyadii ganacsiga la baajiyay
Qaar ka mid ah dadka la dilay ayaa ku dhegganaa diyaarad gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka markii ay duushay, balse waxay u dhinteen geeridooda waxyar kadib markii ay duushay.
Dad rayid ah oo reer Afghanistan ah oo quus ka taagan ayaa hakad geliyay daadgureyntii milatariga.
Qaar ka mid ah dadka la dilay ayaa ku dhegganaa diyaarad gaadiid oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka markii ay duushay.
Ciidamada Mareykanka ayaa ku dhibtooday inay dib u celiyaan dadkii badnaa habeenimadii, waxaana soo baxay warar sheegaya in rasaas la is weydaarsanayo.
Toddoba qof oo rayid ah oo reer Afgaanistaan ​​ah ayaa lagu dilay rabshadaha garoonka diyaaradaha ee Kabul, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ka soo dhacay diyaarad gaadiid oo Mareykan ah oo baxaysay, dhammaan duulimaadyadii ka baxayay caasimadda Afgaanistaan ​​waxaa hakad geliyay dadweyne ku sugnaa waddada ay diyaaraduhu ku ordaan, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka ee Kabul.
Habeenkii Axadda oo dhan, ciidamada Mareykanka ayaa la keenay si ay u ilaaliyaan daadgureynta diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha ayaa ku dhibtooday inay ka ilaaliyaan dad aad u badan oo reer Afgaanistaan ​​ah waddada ay ka duulaan Kabul's Hamid Karzai Airport, oo hadda ah isha kaliya ee u dhexeysa Taliban Afghanistan iyo dibedda.
Qaar ka mid ah dadka la dilay ayaa ku dhegganaa diyaarad gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka markii ay duushay, laakiin waxay u dhinteen geeridooda waxyar kadib markii ay kacday geeridooda.
Duulimaadyadii ganacsi ee ka tagi jiray Kabul ayaa la hakiyay Axaddii, laakiin raxan reer Afgaanistaan ​​ah oo aad u quustay ayaa ku soo xoomay waddada kaliya ee gegida dayuuradaha iyada oo aan loo eegin, markii ugu dambaysay ee la doonayay in diyaarad looga qaado caasimadda Afgaanistaan.
Baabuur Isboorti oo Cusub oo ka hooseeya $30,000